Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-wolffish | Ngeentlanzi
Iintlanzi ezininzi zinikwa igama eliqhelekileyo ngenxa yokufana kwazo kolu hlobo zithelekiswa nalo. Umzekelo, iparrotfish kunye ne-zebrafish bazuze amagama abo kuba bayafana neqwarhashe kunye nesikhwenene. Namhlanje siza kuthetha ngenye intlanzi egama layo eliqhelekileyo eliyifumene ngenxa yokufana kwayo nengcuka. Ewe, masithethe ngongcuka.
Ingcuka yentlanzi Kukwaziwa nangokuthi yi-Atlantic catfish, i-sea catfish, kunye ne-devil fish.. Igama layo lenzululwazi ngu I-Anarchychas lupus kwaye ungowosapho lwe-anarichádidos. Ngaba ufuna ukwazi yonke into malunga nale ntlanzi?
1 Iimpawu ze-Wolffish
2 Indawo yokuhlala
5 Imeko yolondolozo
Iintlanzi zolu sapho bezisoloko ziphethe ukulawula Unonkala oluhlaza kunye nabantu be-urchin yolwandle. Oku kwenza ixabiso lolu hlobo luphezulu, kuba iyasinceda ukulawula iintlobo ezithile eziyingozi ngakumbi kwindawo ezihlala kuyo ukuba ziyekwe zingakhathalelwanga. Ukongeza, ingcuka yinkomba yemeko entle yolwandle, kuba ukuba ibingcolisekile ayinakuphila.
Ingcuka inembonakalo eyodwa neyahlukileyo eyenza ukuba yahluke kwezinye. Inamazinyo afana nomhlathi wengcuka. Inezine ezi-XNUMX ukuya kwezintandathu zokuxhoma amazinyo ngokuqinileyo nangokumila ngokuthe ngcembe. Ezisezantsi neziphezulu ziyafana kwaye zinomqolo osembindini onezibini ezine zemolars kwaye imiqolo engaphandle inamazinyo atyibilikayo.
Kumazantsi emhlathini kukho imiqolo emibini yemihlathi kunye nasemva kwamazinyo kwindawo emile. Umqala ugqunywe ngamazinyo amancinci athe saa.
Ngokubhekisele kumzimba wayo, ubume buhlangene kwaye bungaphantsi kwesilinda ngaphambili, ubugudileyo kwaye uyatyibilika. Izikali zabo zinobuhlanga kwaye zingenisiwe kwaye zifihla uninzi lolusu lwazo.
Eyona Wolffish inkulu kwiRekhodi Yayiziimitha eziyi-1,5 ubude kwaye inobunzima phantse i-18 yeekhilogram. Umbala wale ntlanzi uhlala uhluka phakathi kwemfusa kunye nomdaka, butsundu bomnquma nohlaza ongwevu. Inomphetho wokujika wangemva ofanayo ojikeleza umva wonke kunye nesiphelo esibaleka kuloo ndawo iphefumlela kuyo. Inamacala amakhulu, ajikeleziweyo kwaye ayinayo amaphiko e-pelvic. Umzimba wayo ufana nowe-eel kwaye, ke ngoko, uqubha ngokuthe chu.
Le ntlanzi inokufumaneka kwi amanxweme asentshona nasempuma oLwandlekazi lweAtlantic. Inokufumaneka kwiDavis Strait, kufutshane nommandla waseCanada waseNunavut.
Ukhe waziswa eNew Jersey.
Bengazi nto kakuhle, ziintlanzi ezimiyo. Bavame ukuhlala kufutshane nezindlu zabo ezakhiwe ematyeni. Zifumaneka ngokuqhubekayo kwindawo ye-benthic yolwandle (yolwandle) kwaye inokubonwa kwimiqolomba emincinci nakwiikona ezenza amatye. Ubunzulu bayo buphakathi kwe-20 kunye ne-500 yeemitha. Bathanda amanzi abandayo ukuba nje agcina ubushushu phakathi kwe -1 ne-11 degrees. Ukusinda kula maqondo ashushu asezantsi, ligcina igazi labo liqhubeka nentshukumo eqhubekayo ngenxa yombane wendalo onawo ngaphakathi.
Iimpisi zisebenzisa imihlathi yazo ukutya iimollusks, ii-crustaceans kunye ne-echinoderms. Kunqabile kakhulu ukuba itye kwezinye iintlanzi, kuphela kwiimeko ezibi kakhulu. Xa zityisa ezinye iintlanzi zenza iiqhude kunye neembaza ezinkulu.
Inobuchule obukhulu bokuzingela kwaye iyakwazi ukulawula inani leemichamo zolwandle kunye nononkala oluhlaza. Xa amanzi ecocekile, intabalala yale ntlanzi iyakhula, nto leyo eyenza kube lula ukulawula abantu kwezi zilwanyana kwaye ingachaphazeli impilo yezinto eziphilayo ze-benthic.
Indlela yokuchumisa amaqanda e-wolf yahluke kakhulu kwezinye iintlanzi, ezinjenge-sunfish (ikhonkco). Endaweni yokubeka amaqanda, umntu obhinqileyo kulwandle oluvulekileyo ukuze iintlanzi eziyindoda zikwazi ukuwachumisa kwaye ziqhubeke nendlela, zenza oku kulandelayo: afaka amaqanda ngaphakathi kwaye eyindoda ihlala kwindlwane, iwakhusele ixesha malunga neenyanga ezine. Xa amantshontsho emakhulu kwaye omelele ngokwaneleyo ukuba angazimela, inkunzi iyarhoxa kwindlwane yayo.
Amaqanda abekwa ngumfazi ahlala enawo ubungakanani phakathi kwe-5,5 kunye ne-6 mm ubukhulu. Ngawona maqanda makhulu aziwayo namhlanje. Umbala wabo uluhlaza otyheli kwaye babekwa kumgangatho wolwandle kufutshane namanzi onxweme. Oko kukuthi, iinduli ezithi zitshone ngendalo kwaye zigutyungelwe ngesanti.
Amaqanda anokufunyanwa enamathele kwi-clumps evulekileyo ejikelezwe yi-algae namatye. Ukuvelisa kwakhona, ingcuka ifuna ngaphezulu kweminyaka emithandathu yokuvuthwa.
Abantu baseWolffish baye bancipha kakhulu kwiindawo zeAtlantic ngenxa ukuloba ngokugqithisileyo kunye nokubambisa (njengokuloba). Ukongeza, iinqanawa ezirhuqwayo zitshabalalisa iindawo zokuhlala apho iingcongconi zihlala khona kwaye zakha iindlwane ukukhusela i-fry de ibe indala.
Iminatha ibamba iintlobo ezahlukeneyo kunye namatye anzima athwala yonke into ehamba ngayo. Ukuloba ngokuzonwabisa, nangona kungenjalo kwinqanaba elifanayo lokuloba ngenjongo yokuthengisa, kuchaphazela nokusinda kweengcuka.
Ngaphandle koku, okwangoku, ingcuka yaseAtlantic ihlelwa njenge Iintlobo zeNkxalabo encinci. Ezi ntlobo zezo zikwi-United States National Oceanic and Atmospheric Administration kunye ne-National Marine Fisheries Service inezinto ezithile ezibaxhalabisayo malunga nenqanaba labemi kunye nezisongelo zabo ezinokubakho, kodwa akukho lwazi lwaneleyo lokubahlula. Uhlobo loMthetho wokuzikhusela.
Sele uyazi into engaphaya ngolunye uhlobo lweentlanzi ezihlala elwandle. Ingcuka, irhamncwa lokwenyani kwaye lahlukile kummandla wayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ingcuka yentlanzi